IGLASSNODE yooVimba-Funda ukuRhweba
I-Bitcoin Whales isagcina iiNgqekembe ngaphandle kweNtengiso ye-Bear: I-Glassnode
Ngaphandle kwengozi yamva nje engezantsi kwenqanaba leedola le-30k Bitcoin (BTC), kwi-chain metric ezivela kwi-Glassnode zibonisa ukuba iminenga isekwimo yokufumana ukutya okune-binge.
Ngokwengxelo yeveki yeqonga yohlalutyo ekhutshwe izolo, ibhentshi ebekiweyo yokugcina imali kwi-crypto exchanges isezingeni eliqinisekileyo nangona iguqukile ekubeni ibisoloko izinzile ingaphantsi kwe- $ 36k. Idatha yamva nje ibeka umndilili wokurhoxa ngenyanga kwi-crypto exchanges malunga ne- $ 1 yezigidigidi.
I-Glassnode icacisile ukuba eli nyathelo labatyali mali elikhulu libonisa ukuba bahambisa ukubamba kwabo kugcino olukhuselekileyo kunokuthengisa ngokutshintshiselana.
IGlassnode ikwachaze ukubakho kwenani lezinto kwi-HODLing BTC ukusukela ngoMeyi, iqaphela ukuba eli nani lenyukile ukusuka kwi-250,000 ukuya kwi-300,000 ngoku. Ngokutsho kwe-analytics firm, "Iqumrhu" liqoqo elikhethekileyo lokhenketho lweedilesi ezinxulumene noko.
IGlassnode ityhile ukuba inani le "Amaziko athumela" (amaqela eedilesi awodwa athengisa ukubamba kwawo) ehle kakhulu ukusuka kwi-150,000 ukuya kwi-100,000, ngelixa "Ukufumana izinto" (amaqela eedilesi awodwa HODLing okanye ukuqokelela iingqekembe ezingaphezulu) ziye zanyuka nge-20% ukusuka kwi-190,000 ukuya kwi-250,000 kwangelo xesha linye.
Nangona kunjalo, i-Glassnode yaqaqambisa ukuba uluvo lweemarike luhlule kakhulu ngoku, uqaphele ukuba:
"Sineentengiso ezahlulwe kakhulu, kwaye enye inokwanda kokungazinzi okufuphi kwikona."
Amanqanaba aphambili eBitcoin aBukela-nge-20 kaJulayi
Emva kwexesha elide lokuhamba kwamacala, iBitcoin ekugqibeleni iphule ngaphantsi kweedola ezingama-30k okokuqala ngqa ukususela ngoJuni 22. I-cryptocurrency yokuqala yafumana ubunzima obukhulu kwi-31 pivot zone, eyakhawuleza ukuhla kwayo ngaphantsi kweedola ezingama-30k.
Ingozi yamva nje ithumele i-BTC kwinkxaso yeedola ezingama-29.5k, ilandelwa yi-rebound kwinqanaba le-29.9k yeedola ngoku. Oko kwathethi, inkxaso ye-29.5k yeedola isenokungabi sezantsi kwengozi ekhoyo, kwaye ukuhla okwalandelayo kunokulandela kwiiyure nakwiintsuku ezizayo.
Okwangoku, amanqanaba ethu okuchasana akwi- $ 30,000, i- $ 30,500, kunye ne- $ 31,000, kwaye amanqanaba ethu enkxaso aphambili ayi- $ 29,500, $ 29,000, kunye ne- $ 28,000.
Imali iyonke yentengiso: $ 1.2 zezigidi
Imali yeNtengiso yeBitcoin: $ 558.7 billion
I-Bitcoin Dominance: 46.6%
tags Bitcoin, BTC, Cryptocurrency, IGLASI, iindaba
I-Bitcoin kwiNdlela yokuBuyisa njengabaSebenzi beMigodi yokuQala ngokuSebenza: iGlassnode
Inkampani yokuhlaziya amakhonkco eGlassnode kutshanje inike ingxelo nge Bitcoin (BTC) inethiwekhi, iqaphela ukuba, ngokusisiseko, ikwimo esempilweni ngaphandle kokunyuka kwamaxabiso. Umboneleli we-analytics utyhile ukuba sikwi "Ngeveki ephumlileyo," njengoko i-BTC ihleli iboshwe phakathi kwe- $ 34,900 kunye ne- $ 32,500. IGlassnode iqaphele ukuba:
"Kuqala ukuziva ngathi kuzolile phambi kwesiphango njengoko umsebenzi othulileyo nothuleyo ubonakala kuwo omabini la mabala, avela nakwimixokelelwane yemetro."
Ngeli xesha, inkampani iveze ukuba ukuqokelelwa kwemigodi kunyuka ngokuzinzileyo njengoko imeko yemigodi itshintsha i-metric flips ibuyela kwimowudi yokuqokelela. Inkampani ye-chain-analytics firm iqaphele ukuba:
"Oku kubonisa ukuba olona xinzelelo luthengiswayo luza kubavukuzi abangaxhunyiwe kwi-intanethi lungaphezulu kokuqokelelwa ngabavukuzi abasebenzayo."
Ngokutsho kweBitinfocharts, ireyithi ye-Bitcoin ye-hash irekhode i-goodish uptick okoko yawa kufutshane kwiminyaka emi-2 ngoJuni 28, xa yehla yaya kuma-68 EH / s. Okwangoku, ireyithi ye-BTC ye-hash inyuke nge-32% ukusukela kwengozi yayo kaJuni 28 ukuya kwi-90 EH / s. Olu hlaziyo lubonisa ukuba malunga nesinye kwisithathu samandla e-hash abuyile kwi-Intanethi ukusukela ngediphu.
I-Glassnode iqinisekisile ukuba oku kubuyiselwa luphawu lokuba abasebenzi basezimayini e-China bafudukele ngempumelelo kwezinye iimeko ezifanelekileyo zomsebenzi kwaye baphinde baqala ukusebenza.
Amanqanaba aphambili eBitcoin aBukela-nge-13 kaJulayi
Emva kokuchukumisa inqanaba lama-34,700 eedola izolo, iBitcoin yafumana ukwaliwa okungathethekiyo kwinqanaba eliphezulu leedola ezingama-32k. Okwangoku, eyona mali iphambili yedijithali ikhuphe indlela yayo ibuyela umva ngaphezulu kwenqanaba leedola ezingama-33k, njengoko iinkunzi zeenkomo zijolise ekususeni i-33,700- $ 34,000 ye-axis.
Oko kwathiwa, i-BTC okwangoku ithengisa ngaphakathi kwendawo ehlengahlengisiweyo kunye ne- $ 34k ukumelana nengqondo kunye ne- $ 32,700 esebenza njengezona ndawo kujoliswe kuzo zeenkomo kunye neebhere. Ukuhamba kwelinye lala manqanaba kunokubangela ukutyhalwa okuzinzileyo kwelo cala.
Okwangoku, amanqanaba ethu okuchasana akwi- $ 33,700, i- $ 34,000, kunye ne- $ 35,000, kwaye amanqanaba ethu enkxaso aphambili ayi- $ 33,000, $ 32,700, kunye ne- $ 32,000.
Imali iyonke yentengiso: $ 1.37 zezigidi
Imali yeNtengiso yeBitcoin: $ 622.7 billion
I-Bitcoin Dominance: 45.5%
Ingxelo yeGlassnode ibonisa ukuba iAkhawunti encinci yeBitcoin HODLing inyukile
Ukuhlaziywa: 23 Matshi 2021
Umboneleli we-chain-analytics, i-Glassnode, uxele ukuba iidilesi zibambe i-0.1 ukuya kwi-1 Bitcoin (BTC)—Elibiza ngothando "IiSt Saters"-Ubone ispike esibalulekileyo ukusukela kwimalike ye-cryptocurrency yentengiso ye-cryptocurrency. Nangona kunjalo, inkampani iye yalumkisa ukuba i-on-chain yayo yeetriki ibonisa ukuba imarike yenkomo inokungena kwinqanaba layo lokugqibela.
IGlassnode ichaze ukuba i-Sat Stackers ibisonyuka ngokuzinzileyo kule minyaka mithathu idlulileyo kwaye iqokelele malunga ne-1.23% yonikezelo lonke lweBitcoin ngeli xesha linikiweyo. Oko kwathiwa, ezi akhawunti zincinci ngoku zilawula i-5.2% yazo zonke i-BTC zemigodi.
Umboneleli wenkonzo on-on-chain ubalule ukuba ukuqokelelwa okungapheliyo kwe-BTC ziiakhawunti ezincinci kubonisa ukuba eli qela lizimisele njani kwi-HODLing ngokungazinzi ukusuka kwi-2018 ukuya kwi-2020 ngaphandle kwesiphithiphithi kwintengiso.
Okwangoku, izipaji zewhalethi ezibambe i-100 BTC okanye nangaphezulu zikhule zingaphantsi kwe-1% kunyaka ophelileyo kwaye bezithe tyaba kule minyaka mithathu idlulileyo. Nangona kunjalo, eli qela labatyali mali beBitcoin liphethe uninzi lonikezelo lweBTC-62.6%.
I-Glassnode igqibe kwelokuba olu dluliselo lobutyebi lunokuba luphawu lokuqala lokuba imarike yenkomo ifikelela kwincopho yayo.
Amanqanaba aphambili e-BTC aBukela-Matshi 23
I-Bitcoin iwele kolunye uhlengahlengiso olukhulu ngo-Matshi, njengoko i-cryptocurrency ebekiweyo yehle ngaphezulu kwe-9% kwiiyure ezingama-24 ezidlulileyo. Ukwehla kunokwenzeka ukuba kuqhubeke nokulungiswa kwexabiso langaphambili kwindawo eyi- $ 60k.
Oko bekuthethile, imali ye-cryptocurrency ibonakala ngathi ihlawulelwe kwi-53k yeedola kwaye inokubangela ukunyuka ukuya kwi-60k barrier. Nangona kunjalo, iBitcoin inamanqanaba amaninzi okuchasana ngaphambi kokuba isondele kwinani elijikeleze i- $ 60k, kunye ne- $ 56,700 esebenza njengeyona nqanaba libalulekileyo lokuqhekeka.
Nangona kungenakulindeleka okwangoku, ikhefu elingaphantsi kwe- $ 52,500 yenkxaso linokupela intshabalalo yeenkomo ze-BTC kwaye ithumele imali ye-cryptocurrency kwi-bearish spiral.
Okwangoku, amanqanaba ethu okuchasana akwi- $ 55,000, $ 56,000, kunye ne- $ 56,700, kwaye amanqanaba ethu enkxaso aphambili ayi- $ 54,000, $ 53,000, kunye ne- $ 52,500
Imali yeNtengiso yeBitcoin: $ 1.01 zezigidi
I-Bitcoin Dominance: 59.5%
tags Bitcoin, BTC, Cryptocurrency, IGLASI